အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှမက်ကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ ငါက Mac ကပါ
သင့်ရဲ့ hard drive ကိုမဖျက်ပဲ Mac ကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအသုံးပြုသူသည် Mac မှ Administrator အကောင့်ကိုဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ဖျက်လိုက်တဲ့ဒေတာကိုဘယ်လိုဆယ်တင်ရမလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ အဲဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ Time Machine and backups ဖြစ်တယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊ မိတ္တူကူးသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကိုဖျက်သောအခါအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ.
ဤရွေးချယ်မှုသည် operating system ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များကိုအမှန်တကယ်မသွားဘဲ "format mode" တွင်အသုံးပြုသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစကားပြောငါအစဉ်အမြဲပြောပါလိမ့်မယ် Mac ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းသည်, သို့သော်သင်ဤ installation ကိုမပြုလုပ်လိုပါကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ Administrator အသုံးပြုသူကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရန်ကူးယူထားခြင်းမရှိပါကအချက်အလက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခြင်းလူတိုင်းသည်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ backup လုပ်ထားထုတ်သယ် သင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များဖြစ်သည် ဖိုင်တွဲထဲက ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသုံးပြုသူ (အိမ်) ၏ သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖယ်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
အခုသွားကြည့်ရအောင် System Preferences> အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး password ကိုအတူသော့ခတ်သော့ဖွင့်။ အခုဒီအဆင့်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်သင်္ကေတကိုနှိပ်ပြီး Administrator အကောင့်အသစ်ကိုလုပ်မယ် "+" ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခွင့်ထူးပေးတော်မူ၏။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ Mac restart ပြုလုပ်ပြီး administrator account အသစ်ဖြင့် log in လုပ်ပါ ငါတို့အရင်ကဖန်တီးခဲ့တာ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမယ့်အရာကအုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်နှစ်ခုကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို Administrator မပါဘဲ Mac ကိုထားမထားဖို့ပါ။
ပြီးတာနဲ့ပြန်လည်စတင်ကျနော်တို့ပြန်သွားပါ System Preferences> အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများ ကျနော်တို့ကဖွင့်လှစ်ရန်သော့ခလောက်ကိုရွေးပါ။ ဤအချိန်ကိုသတိရပါ စကားဝှက်သည်အုပ်ချုပ်သူအသစ်အတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုသယ်ဆောင်ပြီးဒီကိုရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်မှာရိုးရှင်းပါသည် admin အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပါ နှင့်ဤအဘို့ငါတို့ကထိပ်ပေါ်မှာကိုယျ့ကိုယျကိုနေရာချ «သင်္ကေတ« အောက်ခြေကနေ။
ဤအခါသမယတွင်ငါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသုံးပြုသူကိုဖျက်သိမ်း၏အချက်မရောက်ရှိပေမယ့်၌တည်၏ အစောပိုင်း OS X ဗားရှင်းမီနူးတစ်ခုပေါ်လာသည် လုပ်ဆောင်မှုအတော်များများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အောက်ကပုံနဲ့ဆင်တူတယ် - ပယ်ဖျက်ထားတဲ့အကောင့်ရဲ့ဖိုင်တွဲကိုဖိုင်တွဲတခုထဲမှာသိမ်းဆည်းပြီး၊ မူလဖိုလ်ဒါကိုမဖျက်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ တတိယ၊ အကောင့်မှအကြောင်းအရာ။
OS X El Capitan တွင်ဤသူသည်မိမိစီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်သည်ဟုပြောသောအသုံးပြုသူ၏အဆိုအရဤ menu သည်ရရှိနိုင်ပုံ (အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကြိုးစားပြီးဓာတ်ပုံများပို့ခြင်းမှထွက်ခွာသွားကြောင်းအတည်ပြုလျှင်)၊ အလန်ဒါကြောင့်ကတည်းကသတိထားပါ တစ်ချိန်ကအဘယ်သူမျှမပြန်သွားလည်းမရှိဖယ်ထုတ်လိုက်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင့်ရဲ့ hard drive ကိုမဖျက်ပဲ Mac ကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ
မင်္ဂလာပါ။ သင်ခန်းစာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ငါ့မှာ Mac ရှိတယ် ၅ နှစ် ၆ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အဲဒါကို format လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ငါထင်တယ်။ ၎င်းကို format ချပြီး time machine တစ်ခုမှစတင်ခြင်းသည်မည်မျှအသုံးဝင်သနည်း။ ဆိုလိုတာကငါပုံတူကူးပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုမိတ္တူတစ်ခုမှပြန်ယူလျှင်၎င်းသည်ဆက်ရှိနေသလားသို့မဟုတ်လမ်းတစ်လျှောက်ပျောက်ဆုံးသွားသောအမှိုက်သရိုက်များရှိပါသလော။
ကောင်းသော Juanjo၊ Time Machine မှစက်ကိုပြန်ယူရန်သင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေးသည်ရံဖန်ရံခါကောင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက OS X ၏မူကွဲတစ်ခုမှပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကကော်ပီကူးယူပြီး TM မှကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးပြန်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
Magnet သည် Split View function အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
Wozniak - Apple ဂေဟစနစ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး